NS 6.0.29 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.0.29 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
NS ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
De NS App is de officiële app van NS.
We willen de NS App zo goed mogelijk maken. Mocht u vragen, tips of andere feedback hebben - in de app kunt u contact opnemen met de ontwikkelaars, of stuur een e-mail naar app@ns.nl
အဆိုပါ NS App ကို NS ၏တရားဝင် App ဖြစ်ပါတယ်။
အများဆုံးအဆင်ပြေဆုံးနဲ့လက်ရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံ: သန်း2ကျော်ကလူ NS App ကိုအသုံးပြုပါ။ အလွယ်တကူ Starbucks ကမှအလုပ်မှအိမ်, ကျောင်းသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးက Galaxy ထံမှစီစဉ်ထားသည်။ လူထုဆိုင်ကယ်လည်းမရှိဆိုပါက, ဒီမှာ Check မိုးရွာရွာနေတုန်းပဲလာမယ့်? ဘတ်စ်ကားများထွက်ခွာခြင်းသို့မဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက္ကစီမြင်ကြသည်မဟုတ်လော လူအပေါင်းတို့သည်ပလီကေးရှင်းမှတဆင့်!
တစ်ခုလုံးကိုအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်လက်ရှိခရီးသွားအစီအစဉ်များကို + ။
+ ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ရထားအဲဒီမှာရောက်လာခြင်းရှိမရှိမသိကြသလော လက်ရှိအနေအထားအဘို့အမြေပုံစစ်ဆေး!
+ သင်အကြိုက်ဆုံး app ကို (ရထား) လမ်းကြောင်းများကိုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်နှောင့်အယှက်တစ်ခုမက်ဆေ့ခ်ျကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လက်ခံရယူကြပါစို့။
+ ပြန်ကြားရေးဘူတာဆိုင်များ, ဖွင့်နာရီ, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်ဘီးစတော့ရှယ်ယာ, etc
သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်. မက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိရန်စွမ်းရည်အပါအဝင်နှောင့်အယှက်၏လက်ရှိစာရင်း + ။
+ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကောင့် NS, အမြင်ချိန်ခွင်လျှာနှင့်ခရီးသွားသမိုင်းဖို့ Login ။
ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သော NS App ကိုလုပ်ချင်ပါတယ်။ သငျသညျမေးခွန်းများရှိပါကအကြံပေးချက်များသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်ရှိသည် - app ကိုအတွက် developer များဆက်သွယ်ပါ, သို့မဟုတ် app@ns.nl အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ
NS အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
NS အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
NS အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
NS အား အခ်က္ျပပါ
freehostsoftware စတိုး 11.01k 1.65M
APK အေၾကာင္း NS အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.0.29
ထုတ်လုပ်သူ Nederlandse Spoorwegen
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.ns.nl/binaries/_ht_1436343430593/content/assets/ns-nl/reisinformatie/ns-rpx-gebruikersovereenkomst-versie-4.0-06082014.pdf
App Name: NS
File Size: 58.05MB
Release date: 2019-06-07 08:12:50
အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သော စီပီယူ: x86, x86-64, armeabi-v7a, arm64-v8a, mips, mips64
လက်မှတ် SHA1: 34:36:02:8E:45:E8:C0:BA:75:5E:31:62:9F:1A:CB:5F:F1:B4:C6:43
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Rob Vermeulen
အဖွဲ့အစည်း (O): NS
နယ်မြေ (L): Utrecht
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Utrecht
NS APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ